Nexus 6 na nke LG G3, anyị na-enye gị data niile ka ị kpebie Gam akporosis
Nkọwa n'etiti Nexus 6 na LG G3
Obi abụọ adịghị ya na akụkọ banyere ụbọchị ndị a na-agabiga ekpughere ọhụrụ Motorola Nexus 6, ọnụ ọhụụ ọhụrụ nke ezinụlọ Nexus nke na-apụ apụ n'echiche nke Nexus pụtara ghọọ njedebe nke ndị ahụ atụle «Adịchaghị» na ọnụahịa nke ọtụtụ n'ime anyị agaghị enwe ike ịnweta.
Na ọhụrụ a ọnọdụ nke ihe Google Nexus nso ga-abụ site ugbu a, anyị ga-eme atụnyere n’etiti Motorola Nexus 6 na ọdụ ndị ọzọ yiri ya ịhụ nke nhọrọ na-awa ndị kasị akpali n'ihi na gị zụọ, ma site price ma ọ bụ site oru nkọwa. Taa, achọrọ m iji atụnyere dị n'etiti ọdụ abụọ yiri nke ahụ, n'otu aka ahụ, Nexus 6 ọhụrụ ahụ ga-eche ihu ọhụụ nke LG na duel nke titans a. Nexus 6 na nke LG G3.
Nkọwa n'etiti ụdị Nexus 6 na LG G3 D855
A gam akporo Android 5.0 Lollipop Gam akporo 4.4.2 upgradeable gam akporo 5.0 Lollipop
Ihuenyo AMOLED 5'96 ”QHD IPS 5'5 "QHD
CPU Snapdragon 805 QuadCore na 2 Ghz Snapdragon 801 QuadCore na 2'5Ghz
RAM 3Gb 2 ma ọ bụ 3Gb dabere na ahịa
Nchekwa ime 32 ma ọ bụ 64 Gb 16 ma ọ bụ 32 Gb nwere oghere Sdcard ruo 128Gb.
Isi ụlọ 13 Mpx nwere onyonyo onyonyo 13 Mpx nwere autofocus enyere aka laser
Igwe n'ihu 2 Mpx 2.1 MP
Njikọ LTE NFC Bluetooth 4.0 WiFi GPS LTE NFC Bluetooth 4.0 WiFi GPS
Batrị 3220 mAh na-enweghị ewepu 3000 mAh na-ewepu
Ihe X x 159.26 82.98 10.06 mm X x 146.3 74.6 8.9 mm
Ibu ibu 184 grams 149 grams
Ahịa 569/649 euro 459/529 euro
Kedu ka ị ga - esi hụ na tebụl agbakwunye ihe dị iche n'etiti ọdụ abụọ ahụ, ma e wezụga nha ha ma ọ bụ ohere ịdebe kaadị nchekwa mpụga iji gbasaa nchekwa nke ime ọnụ yana ohere nke iwepu batrị ahụ, ndị ọzọ ha bụ obere ọdịiche ebe ha abụọ nwere ụfọdụ karia ihe nhazi ike na GPUS iji mee ka sistemụ arụmọrụ Android jiri nwayọ.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọnụahịa, ọdịiche dị n'etiti otu na nke ọzọ dị ma ọ bụ obere gburugburu 100 euro ma ọ bụ ikekwe ntakịrị ihe mgbe niile dabere na ebe anyị na-azụ ya, nnukwu ihe dị iche ọ bụ ezie na ị kwesịrị inyocha onwe gị na ọkwa nnweta gị.
Banyere sọftụwia nwegasịrị nke gụnyere ọtụtụ arụmọrụ arụnyere na sistemụ arụmọrụ gam akporo, na nke a LG ọnụ merie LG G3, ọnụ na ngwa ndị dị ka Ngwa ngwa ngwa, Memo ngwa ngwa, ma ọ bụ sọftụwia igwefoto na-eme ka ọ bụrụ onye mmeri doro anya na nke a.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ mbipụta nke mmelite na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, otu akụkụ nke ọ ga-emeri Nexus 6 nke Google nwere ebe ọ bụ na ọ na-enweta mmelite ndị a na-akpaghị aka na ozugbo ọ hapụrụ, nke nwere iwu mmelite LG, anyị maara nke ahụ Ọ na-aga imelite na gam akporo 5.0 Lollipop mana mana otu ma ọ bụ mgbe.
Site na data ndị a na aka, ugbu a ka ọ dị gị n'aka ime mkpebi ikpeazụ na-agbago niile PROS na CONS awa site na ihe abụọ a gam akporo gam akporo ọnụ. N'iburu n'uche, na ị họọrọ nke ị họọrọ, ị ga-azụta ezigbo ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Nkọwa n'etiti Nexus 6 na LG G3
Naanị nke ahụ abụrụla m "vesos" ma merie G3 na ụdị nke 32 na 3GB na infrared na ọnụahịa na-adọrọ mmasị. Ogo ya abụrụla mkpebi. Echere m na nke 6 abụghị maka onye ọ bụla, n'eziokwu, echere m na ọ bụ ahịa ka nta.
Lg G3 ahịa price € 399 ka 499 649, site na ebe rue 100 XNUMX… ..no € XNUMX
LG G3 dịgasị iche na ọnụahịa dabere na ebe ịzụrụ ya, dịka ọmụmaatụ na Movistar hapụrụ gị maka Euro 384, ma ọ bụrụ na ị zụrụ ya na ebe El Corte Inglés na-efu 529 euro. Achọrọ m ikwu okwu na-enweghị isi, dịka m kwuru, na ọnụahịa nwere ike ịdị iche dabere na ebe anyị zụrụ ya.
Ihe m ka na-eche bụ kedu ka ị si mara na igwefoto LG ka mma, ọ bụrụ na Nexus 6 erubeghị na ahịa ...
Ọ bụ echiche, dabere na nke ọzọ Nexus ọnụ dị ka Nexus 5, nke bụ ejima nwanne LG G2, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ, nwere ngwa nke ya maka igwefoto dị elu karịa nke gam akporo ma ọ bụ Google, weghaara nke ọma foto ma nke ọma na nke ọjọọ ọnọdụ ọjọọ. Nke ahụ bụ otu ihe kpatara na Nexus na ezigbo Android dị iche na nke ụlọ ọrụ ndị dị ka LG, Sony, Samsung ma ọ bụ HTC, nke ndị nke a jikọtara ngwa nke aka ha yana arụmọrụ ọhụụ na nke na-enyekarị uru na njedebe.
Ok ... imeela nnọọ maka nkọwa a ...
Easily jikwaa niile gị gam akporo downloads na Nchekwa onwe-Paghaa
Anwansi nile nke basketball na-abịa na gam akporo na NBA 2K15